Ny fitsangatsanganana any an-tany hafa dia olana ihany koa ho an'ireo mpandeha voalohany ary koa ho an'ireo izay mandeha matetika amin'ny dia iraisam-pirenena. Mahavelombelona ny fitsidihana firenena hafahafa, saingy rehefa miomana tsara ianao. Raha misafidy pasipaoronao fotsiny ianao, manangona kitapo ary miala amin'ny dia, dia mety hivadika olana maromaro ireo fialantsasatra.
Mba hahazoana antoka fa mankafy tanteraka ny dia ataonao iraisam-pirenena ianao, ireto misy hacks amin'ny fitsangatsanganana. Na handeha hanao raharaham-barotra ianao na hanao fialan-tsasatra ho an'ny mpianakavy, ny toro-hevitra momba ny dia iraisam-pirenena, omena eto dia hanampy anao amin'ny tranga rehetra.
Fahasalamana sy filaminana
Tehirizo ny kopian'ny pasipaoronao: Raha very ny pasipaoronao any amin'ny firenena hafahafa dia mety hivadika korontana ilay dia. Tsy ny fahaverezan'ny pasipaoro ihany fa ny olana amin'ny fiverenana ihany. Miaraka amin'ny photocopy an'ny pasipaoro mitazona kopia elektronika ao amin'ny kaonty mailakao.
Mifandraisa amin'ny dokotera: Ny fitsidihana ny dokotera alohan'ny handehananao amin'ny dia dia hevitra mety hiantohana ny fahazoana ny vaksiny rehetra. Hamarino tsara fa nanavao ny zava-mahadomelina manan-danja rehetra ianao.
Hihaona amin'ny mpitantana fiantohana: Aza adino ny mihaona amin'ny mpamatsy anao alohan'ny hiainganao amin'ny dia. Anontanio ny mpanome fiantohana momba ny fangatahanao ara-pahasalamana, ny fampiharana azy ao amin'ny firenena izay notsidihinao ary takianao raha misy tranga maika. Indraindray izy ireo dia mety hanome sosokevitra anao hahazo fiantohana fanampiny na fiantohana fanampiny.
Mampiova vola alohan'ny handehananao: Ny fahitana ireo birao fifanakalozana vola vahiny any amin'ny firenena hafahafa ary avy eo mandoa vola be amin'ny fiovam-po fa tsy misy safidy hafa dia fahadisoana lehibe ataon'ny mpandeha vaovao. Ataovy ny matematika alohan'ny handaozanao ary ahazoana ny tahan'ny fiovam-po tsara indrindra any amin'ny firenenao.
Mahaiza mampiasa vola eo an-toerana: Tsy isalasalana fa ny carte de crédit sy debit dia nanamora ny fiainana sy tsy nisy fihenjanana, satria tsy mila mitondra vola amin'ny fotoana rehetra ianao. Fa rehefa mandeha dia iraisam-pirenena ianao dia tokony hitahiry vola miaraka aminao foana fa tsy ny toerana rehetra toy ny lamasinina, bus sns no mandray carte de crédit.
Vahaolana amin'ny roaming iraisam-pirenena: Faktiora finday goavambe noho ny fihoaram-pefy fiampangana ny roaming iraisam-pirenena dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra mifandray amin'ny dia any ivelany. Tsy azo atao koa ny manantena ireo mpandeha lavitra hanalavitra ny telefaonin'izy ireo. Ka hiantohana ny tsy fahaverezan'ny volavolan-dalàna aorian'ny fiverenanao, misintoma fampiharana fiantsoana tsara toa an'i Ajura. Ireo fampiharana ireo dia ahafahan'ny mpampiasa manao antso iraisam-pirenena avy amin'ny SIM ao an-toerana ary izany koa tsy misy fiampangana mandehandeha.
Fonosana ihany no ilaina: Rehefa mitsidika firenena vaovao ny mpitsangatsangana sasany dia mahatsapa fa toa tsy hahazo na inona na inona any ary manandrana manangona tsirairay sy ny zava-drehetra. Ny hevitra tsara dia ny manangona izay ilaina fotsiny.
Asio marika ny kitaponao: Amin'ny fotoana anaovan'ny ankamaroan'ny mpandeha kitapo fitsangatsanganana amin'ireo orinasa iray ihany dia mety ho sarotra ny manavaka azy ireo. Mba hahazoana antoka fa tsy afangaronao amin'ny mpandeha hafa dia asio marika ny kitaponao.
Angony ny antsipirian'ny hotely: Makà antsipiriany feno momba ny hotely anao ary tazomy hiaraka aminao foana. Manomboka amin'ny adiresy hotely ka hatramin'ny nomeraon-telefaona, mifandraisa olona vonjy maika sy ny làlana ahatongavana any, tazomy an-tsoratra na amin'ny telefaona ny zava-drehetra.
Laza miriaria: Na dia mpizahatany iraisam-pirenena matetika aza dia mahazo antso manokana sy drafitra angon-drakitra rehefa mivoaka any ivelany, dia tsy manao izany ny mpandeha matetika na voalohany. Ho azy ireo, ny fametrahana ny telefaona finday hitehirizana tahan'ny fivezivezena manerantany amin'ny data dia hevitra mety.
Manantena aho fa ho hitanao fa mahasoa ireo torohevitra !!